यो वसन्त मा यात्रा जान तपाईं कहाँ चाहनुहुन्छ? - Jomo प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
वसन्त, चाँडै आउँदै छ तपाईं कुनै पनि समयमा एक यात्रा मा जान चाहनुहुन्छ? वा बाहिर जाने र फरक दुनिया अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं आफैलाई वा परिवार एक प्रभावशाली र सिद्ध छुट्टी दिन चाहनुहुन्छ?
जवाफ हो हो भने, कृपया बाहिर जान एक घमाइलो दिन छनौट गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईं आफ्नो यात्रा को अन्त मा अप्रत्याशित दृश्यहरु पकड हुनेछ।
तर, एउटा प्रश्न छ यातायात तपाईं चयन गर्न, विमान वा तालिम रुचि को जो दयालु? तपाईंले जे चयन, तपाईं एउटा यात्रा को अन्त मा एक ठाउँ आएपछि, तपाईं एक उत्कृष्ट छोटो-दूरी परिवहन आवश्यक छ। तर जो छोटो-दूरी यात्रा उपकरण सबै भन्दा राम्रो छ?
आजकल, को विद्युत skateboards भन्दा जवान बालिका र केटाहरू द्वारा धेरै लोकप्रिय छन्। यो मात्र एक राम्रो यात्रा उपकरण हो तर पनि मान्छे आँखा साँच्चै आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। चीन Koowheel2पुस्ता बिजुली longboard (दोहोरो Brushless हब-मोटर्स), प्रतिस्थापन ब्याट्री प्याक छ ब्याट्री पैक 2pcs, 60 किमि पछिल्लो गर्न सक्छन् अब जानुहोस्। यसको सामान्य गति 30km / घन्टा, माथि गति 42km / घन्टा छ, छिटो जानुहोस्। (शरीरको वजन र सडक अवस्था आधारमा) यसबाहेक, यस हवाई यात्रा को लागि स्वीकृत एउटा बिजुली स्केटबोर्ड छ, तपाईं मा सबै बोर्डिङ समस्या चिन्ता छैन।
तपाईं फेशन केटी वा केटा हो भने, ल्याउन बिजुली स्केटबोर्ड आफ्नो भन्दा राम्रो विकल्प हो। तपाईं सुरु गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि समयमा यो संसारको अन्वेषण र सँगसँगै सुन्दर दृश्यहरु आनन्द। तपाईं यो वसन्त मा एक सुखद र विभिन्न यात्रा इच्छा।